यो दोहोरिएको पोष्ट हुन सक्छ ... तर मैले वास्तवमै यसमा जोड दिन आवश्यक छ। मैले धेरै कम्पनिहरु सबै सामाजिक मीडिया रणनीतिहरु मा ठोकर देखेको छु। तिनीहरूले अन्ततः यसलाई पूरै छोडिदिए। मैले तिनीहरूलाई जवाफ दिन सक्दिन भन्ने प्रश्न किन उनीहरूले पहिलो स्थानमा प्रयास गरे?
सामाजिक मिडियाको उच्च प्रयोगको अर्थ यो विज्ञापन गर्नको लागि राम्रो ठाउँ हो। सामाजिक मिडिया विज्ञापन फ्याँक्न केहि छैन को शीर्ष मा, यो भित्रबाट संचार गर्न केहि हो। धेरै कम्पनीहरूले ब्यानर विज्ञापन र सामाजिक मिडिया साइटहरूमा टेक्स्टल विज्ञापनको लागि पैसा खसाल्छ जहाँ प्रयोगकर्ताहरूको कहिल्यै खरीदको आशय हुँदैन।
सामाजिक मिडिया सरल छ, तपाईं मात्र गर. होईन! सामाजिक मिडिया सरल छैन। एक लंच पार्टी मा भइरहेको कल्पना र एक संभावना संग आफ्नो उत्पादनहरु र सेवाहरु मा बोल्दै। ऊ मुस्कुराउँदछ, तपाईं मुस्कुराउनुहुन्छ, उसले एक प्रश्न सोध्दछ, तपाईं सबै सही उत्तरहरू भन्नुहुन्छ ... तपाईं खाजाको लागि तिर्नुहुन्छ ... तपाईंले आफ्नो भरोसा समात्नुभयो। अनलाइन, तपाईले उनीहरूलाई आउँदै गरेको देख्नु हुन्न, उनीहरू कहाँ छन् भनेर कहिले पनि थाहा पाउँदैनन्, किनकी तिनीहरू तपाईंलाई भन्दा धेरै ज्ञानी छन् भन्ने तथ्य बाहेक अरू केही पनि थाहा छैन।
सामाजिक मिडिया कसैको साथ विश्वास निर्माण गर्दै छ जुन तपाईंले कहिल्यै नभेटाउनु भएको हुन सक्छ। यो गाह्रो छ, यसले समय लिन्छ ... यो म्याराथन हो, स्प्रिन्ट होइन। सामाजिक मिडिया धेरै कम्पनीहरु विफल किनभने तिनीहरूले स्रोतहरु र समय को कम लगन को गति निर्माण गर्न को लागी लिन्छ। उनीहरूले महसुस गर्दैनन् कि यो लामो अवधिको लगानी हो, छोटो अवधिको रणनीति होइन।
आज रियल इस्टेट बारकैम्प इन्डियानापोलिसमा प्यानलिस्टको रूपमा, तपाईंले कोठामा एजेन्सीहरू र दलालहरूको दायरा देख्न सक्नुहुनेछ। केहि राम्रा साथी र क्लाइन्ट पाउला हेनरी (दुबै) लाई राउन्डपेग र DK New Media उनको मद्दत गर्नुहोस्), यति टाढा स्प्रिन्ट गर्दै छन् कि उनीहरूले वास्तवमै सबै परम्परागत मिडियालाई रद्द गरिसकेका छन् र पूर्ण अनलाइन छन्। पाउलाको समस्या छैन कसरी नेतृत्व प्राप्त गर्ने... यो उनको सामाजिक मिडिया रणनीति यो गति मा छ जब यो सबै आफ्नो सुराका सबै काम गरीरहेको छ कसरी राख्न छ।
कोठामा अन्यहरू अझै पनि कर्भ पछाडि कार्यरत थिए ... कुनै ट्विटर, कुनै फेसबुक, कुनै अनलाइन व्यक्तित्व, कुनै खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन, कुनै ब्लगिंग, आदि। यी मान्छेहरूलाई एक प्रभावशाली अनलाइन मार्केटिंग रणनीति निर्माण गर्न धेरै ढिलो भएन ... तर यो पनि हो तिनीहरूलाई मेरो नम्र रायमा सोशल मिडिया रणनीतिमा उत्र्न चाँडो नै।